မြန်မာ, 14 ဇူလိုင် 2017
14 ဇူလိုင် 2017 သောကြာ
14 ဇူလိုင်၊ 2017
တရုတ်နိုဘဲလ်ဆုရှင် ကွယ်လွန်ခြင်းအပေါ် ဒေါ်စု ရပ်တည်ချက်ကို သုံးသပ်
တရုတ်အစိုးရ အတိုက်အခံ တဦးဖြစ်တဲ့ နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် လူရှောင်ဘို ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အတွက် အလွန်ပဲ ၀မ်းနည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်း နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမား အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူတွေက ထုတ်ဖော် ပြောဆိုနေကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အိမ်နီးချင်း မြန်မာနိုင်ငံက နိုဘဲလ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့တော့ လူရှောင်ဘို ကွယ်လွန်သွားတဲ့အပေါ်မှာ တစုံတရာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာ မရှိသေးပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေ တိုးပွားလာနေချိန်မှာ မြန်မာ့လူငယ်တန်း ဒီဇိုင်းပညာရှင်တွေကလည်း ပြည်တွင်းဖြစ် အထည်တွေနဲ့ မြန်မာဆန်တဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေကို ဖန်တီးတီထွင် ထုတ်လုပ်လာနေကြတဲ့အကြောင်း AFP သတင်းဆောင်းပါးကိုအခြေခံပြီး မခွာညို တင်ပြထားပါတယ်။
သတင်းအကျဉ်းချုပ် ၀၇. ၁၄. ၂၀၁၇
ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ တပ်ချုပ်ရာထူးမှတ်ချက် တိုင်ကြားချက် သမ္မတရုံးပြန်ကြားစာပို့
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ အဆင့်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ ပြောဆိုချက်အပေါ် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက ဝန်ကြီးချုပ် ဆောင်ရွက်ရမယ့်အပိုင်းကို ညွှန်ကြားထားပြီး ဒီကနေ့ ညနေပိုင်း အထိတော့ တစုံတရာ ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် မိုဒီ နဲ့တွေ့ဆုံ
နှစ်နိုင်ငံ စစ်တပ်တွေကြား နီးကပ်တဲ့ ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ထားနိုင်တဲ့အပေါ်မှာ ၀န်ကြီးချုပ်မိုဒီက ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ တွေ့ဆုံချိန် ပြောကြားခဲ့သလို၊ အိန္ဒိယရဲ့ အရှေ့မျှော် ၀ါဒမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံတခု ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ နှစ်နိုင်ငံကြား ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ တိုးမြှင့်သွားဖို့ သူ့အနေနဲ့ သန္နိဌာန် အခိုင်အမာ ချထားတဲ့အကြောင်း ၀န်ကြီးချုပ် မိုဒီက ပြောပါတယ်။
အိန္ဒိယအကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရမှု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၀မ်းနည်းသ၀ဏ်လွှာပို့
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့က အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေအတွက် အထူး ၀မ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း ဖော်ပြထားတဲ့ သ၀ဏ်လွှာတစောင်ကို နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ် နေရိန်ဒရာ မိုဒီဆီကို ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့စွဲနဲ့ ပေးပို့ခဲ့တဲ့အကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။